EDP ​​Renovables dia hanome angovo azo havaozina ho an'i Nestlé any Etazonia | Fanavaozana maintso
Ny Portiogaly EDP Renovables, sampana iray an'ny EDP ary miaraka amin'i foibe any Espana, dia nanambara fifanarahana 15 taona hividianana sy hivarotana herinaratra azo havaozina ho an'ny zavamaniry 5 an'ny Nestlé misy firenena maro.
Raha ny marina dia hanome 80% ny herinaratra ilaina izany famatsiana dimy amin'ireo zavamaniry ao amin'ny fanjakan'ny Pennsylvania, Etazonia.
2 Multinationals hafa izay manolo-tena amin'ny angovo azo havaozina
2.1 Apple sy ny toeram-pamboleny misy rivotra
Ny fifanarahana dia manondro ireo ozinina famokarana ary Ivotoerana fizarana tantanin'i Nestlé Purina PetCare, Nestlé USA ary Nestlé Waters Amerika Avaratra amin'ny tanànan'ny Allentown sy Mechanicsburg (Pennsylvania).
Voalaza fa miovaova ny EDP dia hanome 50 megawatts Ny herinaratra. Nasongadin'ity fanambarana ity ihany fa ao anatin'ny herintaona latsaka dia "20% ny herinaratra ampiasain'i Nestlé any Etazonia dia avy amin'ny loharano azo havaozina."
Ho fanampin'izay, nanamafy i Nestlé fa hamela ny fifanarahana amin'ny orinasa portogey «Tapaho ny vidin'ny angovo, fadio ny fiovaovan'ny vidin'ny solika fosily "ary" miadia mifaninana ".
Hoy ny talen'ny talen'ny famatsiana an'i Nestlé Etazonia, Kevin Petrie: «Ny fiaraha-miasa amin'i EDP Renovables dia manampy antsika handroso mankany amin'ny tanjontsika hahatratra ny fiantraikan'ny tontolo iainana null eo anelanelan'ny ankehitriny sy ny 2030 ary ohatra iray hafa amin'ny fizotry ny fanovana ny orinasantsika ", hoy ny fanambarana ny
Miaraka amin'ny fanolorana ity fifanarahana ity, EDP Renovables hanitatra fahaiza-manao ao amin'ny toeram-piompiana rivotra Meadow Lake VI, any Benton County (Indiana), izay mpitarika ny orinasa Portiogey amin'ny famokarana angovo rivotra
Multinationals hafa izay manolo-tena amin'ny angovo azo havaozina
Tsy i Nestlé irery no multinasional lehibe miloka amin'ny fanavaozanaAzontsika atao koa ny miresaka momba an'i Apple, Nike, Amazon, ankoatry ny hafa.
Apple sy ny toeram-pamboleny misy rivotra
Iberdrola dia hamatsy angovo ho an'ny orinasa teknolojia Apple mandritra ny roapolo taona manaraka, 5 azo ovaina, amin'ny alàlan'ilay valan-javaboary voalaza etsy ambony. Aiza ianao no hampiasa vola? 300 tapitrisa farafahakeliny dolara.
Izany fampiasam-bola rehetra izany dia amin'ny alàlan'ny Orinasa Avangrid, Sampana famokarana angovo azo havaozina any Iberdrola any Etazonia. Tokony ho tsaroana fa ilay goavambe Apple teknolojia, no orinasa lehibe indrindra manerantany amin'ny sandan'ny tsena, ary manodidina ny 880.000 tapitrisa euro ny sandany ankehitriny.
Ny fifanarahana dia misy ny fananganana a orinasa mpamokatra herinaratra ao amin'ny County Gilliam (Oregon) izay hanana 200 megawatts (MW), hanomboka amin'ny taona ho avy (2018) ny asa ary hiasa amin'ny taona 2020. Ny fampiasam-bola ho an'ny fanombohana ny valan-javaboary Montague dia mitentina 300 tapitrisa dolara (275 tapitrisa euro).
Tamin'ny alàlan'ny fifanarahana vita sonia dia manana i Iberdrola sy Apple nanao sonia fifanarahana fivarotana angovo maharitra, Noho izany, ny orin'asa mandeha amin'ny herinaratra tarihin'i Ignacio Sánchez-Galán dia hanana, hiasa ary hikarakara ny fiompiana rivotra. Raha ny niteraka angovo elektrika amin'ny trano mandritra ny roapolo taona ho avy dia homena ny toeran'ny Apple.
Ampio fa ho hita ny valan-javaboary akaikin'ny fananana hafa an'ny orinasa ao Oregon, izay hanampy amin'ny fanatanterahana ny fihenan'ny vidiny (synergies).
Tamin'ny faran'ny taona lasa dia nanao sonia fifanarahana stratejika maharitra ny mpanam-pahefana Iberdrola miaraka amin'i Nike, mpanamboatra akanjo amerikana. Araka ny fifanarahana, Avangrid dia hamatsy angovo rivotra ho an'ny orinasa amerikana mandritra ny lny folo taona manaraka.
Hahatratra ny «ny angovofoibe » avy any Nike any Breaverton, Oregon, avy amin'ny valan-javaboary Leaning Juniper TT, any Oregon ihany koa, ary Jupiter Canyon, any Washington.
Ny fahefana nifaneken'ny Nike dia nahatratra 70 megawatt (MW), raha oharina amin'ny 350 MW izay ananan'ny zavamaniry roa.
Raha ny fanazavan'i Nike dia natomboka ny volana janoary lasa teo ny fifanarahana ary ampahany amin'ny fanoloran-tenan'ilay orinasa hahatratra ny famatsiana zato isan-jato azo havaozina amin'ny fotodrafitrasa hatramin'ny 2025.
Ho fanampin'izay, Iberdrola (Avangrid) dia mamatsy angovo rivotra ho Amazon, goavambe e-varotra, amin'ny alàlan'ny Amazon Wind Farm US East, zaridaina iray any North Carolina, izay efa miasa.
Ireo fifanarahana rehetra ireo dia manasongadina ny fikasan'ny orinasa iraisam-pirenena amerikana hanohy hampiroborobo ny angovo maitso, na eo aza ny fanemorana ny lalàna. politika momba ny tontolo iainana natolotry ny filoham-pirenena amerikana vaovao, Donald Trump, mifanohitra amin'ny politikan'ny teo alohany, Barack Obama.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » EDP ​​Renovables dia hanome angovo azo havaozina ho an'i Nestlé any Etazonia
Steven dia hoy izy:
Lahatsoratra tena tsara, arahaba soa 🙂
Valiny tamin'i Steven
Ny filokana amin'ny arintany dia manapoizina ny rivotra any Vietnam